Famoronana izay tokony harahinao amin'ny Instagram hahazoana aingam-panahy isan'andro | Famoronana an-tserasera
Instagram Izany dia tambajotra sosialy somary mahaliana ho antsika miasa amin'ny tontolon'ny sary. Fantaro ny fironana vaovao, miambena, manome aingam-panahy ... Tsy mora foana izany. Izany no antony tsy maintsy ampiasantsika loharanom-pahalalana Avelao hisondrotra ny fisainantsika, hampiseho amintsika ireo vaovao eny an-tsena, hanampy antsika amin'ny asantsika matihanina isan'andro (toy ny tranga amin'ny Creativos Online, marina ?;)).
Ao amin'ny Instagram ny fanontaniana lehibe dia ity manaraka ity, iza no tokony harahiko? Omeko fampiasana manokana na matihanina ve izy io? Ny marina dia afaka mampiasa azy araka izay hitanao fa mety, saingy tsy misy isalasalana fa mety ho tambajotra sosialy iray hafa io misotro aingam-panahy. Manaraka ireo matihanina mety ve ianao? Ity misy lisitry ny matihanina isan-karazany izay mety mahaliana anao ny asany. Tsarovy fa, raha fantatrao ny mombamomba anao amin'ny Instagram izay hitanao fa manintona indrindra (miresaka amin'ny fomba mahazatra), azonao atao ny mizara izany aminay amin'ireo hevitra hanitarana ny lisitra.
1 Iza no hanaraka amin'ny Instagram?
1.4 Isan-karazany (endrika, sary, typografika ...)
Iza no hanaraka amin'ny Instagram?
Isan-karazany (endrika, sary, typografika ...)
tsy fitoviana isan'andro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Famoronana izay tokony harahinao amin'ny Instagram ho fitaomam-panahy isan'andro